Soomaaliya oo codsatay in dhaqaale lagu taageero | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Soomaaliya oo codsatay in dhaqaale lagu taageero
Soomaaliya oo codsatay in dhaqaale lagu taageero
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeedinayay shirka golaha loo dhan yahay ee Qaramadda Midoobay ayaa ka codsaday deeqbixiyaasha caalamka inay Soomaaliya ku caawiyaan nus bilyan dollar si buu yiri wax looga qabto arrimaha abaarta iyo gaajada, isaga oo dhinaca kalena ku dhawaaqay in waddanku uusan kusii jiri doonin muddo dheer “burbur.”
“Aad baan uga xumahay inaan idinku wargeliyo in xaaladda bani’aadminnimo ee Soomaaliya ay imminka cakiran tahay una baahan tahay in si degdeg ah wax looga qabto,” ayuu yiri madaxweynuhu mar uu ka hadlayay fadhiga 69aad ee golahaasi.
Xasan Sheekh wuxuu sidoo kale sheegay in ku dhowaad seddex milyuun iyo labo boqol oo kun oo shacab ah ay xilligaan u baahan yihiin gargaar, iyada oo hal milyuun tiro ka badan ay wejihayaan cunno yari ba’an.
Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa bogaadiyay hawlgalka socda ee loogu magac daray Badweynta Hindiya, wuxuuna sheegay in ciidamadda huwantu ay dib gacanta xukuumaddiisa ugu soo celiyeen 70% guud ahaan gobollada koofurta iyo bartamaha Soomaaliya kaddib duullaan lagu qaaday dagaalyahanka xarakada Shabaab.
Soomaaliya oo ku taal marin muhim ah oo isku xira Afrika iyo Carabta ayaa weli u nugul inay gabbaad ka dhigtaan Islaamiyiinta jihaad doonka ah.
Previous articleBadhan oo deggan kaddib dagaal ka dhacay
Next articleAbuu Cubeyd oo abaalmarin badan lagu doonayo